अराजकताको बन्दी बनेको संसद् – News Of Nepal
आज नागरिकले भोग्नुपरेका विषयमा संसद्मा प्रश्न गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्वमा प्रतिपक्ष त रहेन नै, आफ्ना मतदाताका समस्याका विषयमा बोल्न चाहने सांसदको अधिकारमाथि अवरोध खडा गरिएको छ । ओली वा उहाँको पार्टीलाई जुन निकायले गलत ग¥यो भन्ने लागेको छ, त्यसका उपर कारबाही गर्ने अधिकार सरकारले राख्दैन । यो ओलीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । १४ सांसद हटाउन एमाले आफैँ अदालत गएकै छ । एमालेले भनेझैँ सभामुखका कारण सिर्जित समस्या हो भनेर मान्ने हो र उहाँलाई हटाउन चाहेको भए हो भने पनि त्यसको प्रक्रियामा पस्न एमालेलाई कसले रोकेको छ ? अल्पमतको यो अधिनायकवादी र गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप संसद्ले कतिञ्जेल टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छ ? संसद् कतिञ्जेलसम्म अराजकताको बन्दी बन्न सक्छ ? गोरखापत्र दैनिकबाट